Tafaariiq + Raadinta Maxaliga ah = Wishpond | Martech Zone
Monday, July 11, 2011 Arbacada, Nofeembar 30, 2011 Douglas Karr
Shaki kuma jiro in e-commerce ay saameyn weyn ku leedahay tafaariiqda… laakiin si kasta oo ay u weyntahay kormeerahaagu, ma beddeli doono ku lugeynta dukaanka tafaariiqda iyo taabashada sheyga. Sidoo kale maraakiibta bilaashka ah marwalba badal uma noqon doonaan ka bixida dukaanka shayga aad hada rabto. Shalay uun waxaan ka soo iibsaday biyo-cabis Bath Bath iyo Beyond. Waxaan ka aqriyay tan onlaynka ah oo ku saabsan iyaga xitaa waxaa lasiiyay qiimo dhimis mid kamid ah goobaha sites laakiin waxaan rabay inaan aado guriga oo aan sameeyo galabkeyga ugu horeeya ee casiirka veggie galabta that dib uma dhigin usbuuc.
Rajo waxay rajeyneysaa inay noqoto dhexdhexaadka ka dhexeeya dukaamada tafaariiqda iyo khadka tooska ah, iyadoo la siinayo sida ugu fiican adduunka. Tani waxay fursad qaali ah u noqon kartaa dukaamada tafaariiqda ee arkay hoos u dhaca iibka si ay u helaan dareenka internetka ee ay u qalmaan.
Laga soo bilaabo goobta Wishpond:
Wishpond waxay ka heshaa alaabada aad rabto dukaamada kuu dhow. Mashiinka wax iibsiga maxalliga ah ee Wishpond wuxuu baaraa dukaamada ku dhow wuxuuna khariidadeeya heshiisyada ugu wanaagsan magaalada. Sugitaan dambe ma sugayo, kharashka dhoofinta ee dambe Hel waxa aad rabto maanta.
Macaamiisha jeebkaaga, meelkasta oo aad tagtid. Barnaamijkeena iPhone wuxuu fidiyaa awooda wax iibsiga ee maxaliga ah. Hel barnaamijka si aad ula socoto heshiisyada u dhow barta aad taagan tahay, haddii aad daaqad ka adeegato dariiqa ama aad ka daalacanaysid raaxada guriga.
Samee Rabitaan: hel qiimayaasha aad jeceshahay. Ma jeclaan lahayd in baaritaanka badeecada maxalliga ahi kuu qaban karo shaqada? Samee Rajo A badeecada aad jeceshahay, Wishpond ayaa kugu wargalin doonta marka qiimuhu hoos u dhaco, waxaad ka heshaa alaabooyin la mid ah kuwa u dhigma qiimaha aad rabto oo ka dir diwaanno shaqsiyeed dukaamada kuu dhow kuwaas oo u dhigma qiimahaas.
The Xarunta Ganacsiga Wishpond waxay awood siineysaa tafaariiqleyda maxalliga ah inay si fudud kor ugu qaadaan alaabtooda iyo heshiisyadooda, iyagoo siinaya dadka wax iibsanaya xulasho wanaagsan oo ah dukaamada maxalliga ah oo ay kala xushaan.
Waa kuwan fiidiyowga gaaban ee adeegga:
Hadana haddii aad wax shaki ah ka qabtid in tafaariiqda ay is beddeleyso, halkan waxaa ku yaal tirooyin waaweyn oo laga soo qaaday Wishpond oo ku jira qaab muuqaal ah oo sharraxaya halka ay ka caawinayaan.
Naqshadaha iyo B2B Tweeting
Jul 12, 2011 markay tahay 5:56 PM
Waad ku mahadsan tahay qoritaanka!